चिकित्सकले मृ’त घोषित गरेका युवा पोष्टमार्टम गर्नु भन्दा पहिले जुरुक्क उठेर यस्तो भने? – Hamro24News
चिकित्सकले मृ’त घोषित गरेका युवा पोष्टमार्टम गर्नु भन्दा पहिले जुरुक्क उठेर यस्तो भने?
July 16, 2021 adminLeaveaComment on चिकित्सकले मृ’त घोषित गरेका युवा पोष्टमार्टम गर्नु भन्दा पहिले जुरुक्क उठेर यस्तो भने?
काठमाडौ । फरवरी २७ मा भएको सडक दुर्घटनामा एक जना युवक परे । उनी मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेका थिए । भारतको कर्नाटकका २७ वर्षीय सन्मुख गोमदी दुर्घटनामा परेका हुन् । उनलाई दुर्घटनास्थलवाट गम्भिर घाइते अवस्थामा नजिकैको अस्पतालमा भर्ना गरियो । अस्पतालमा उपचारका क्रममा उनको निधन भयो । उपचारमा संलग्न चिकित्सकले उनलाई मृ त घोषित गरे । सुरुमा दुर्घटना पश्चात उनलाई तत्काल नीजि अस्पतालमा लगिएको थियो । त्यहाँ परिक्षण पछि उनको निधन भइसकेको चिकित्सकहरुले बताए ।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला👇👇👇👇****
स्याङ्जा बाट आयो अत्यन्तै डरलाग्दो खबर : के होला अब नेपालमा ?
बेइजिङमा यो बर्षकै सबैभन्दा भारी बर्षा, जनजीवन प्रभावित?